यी हुन् होटल भन्दा महंगा नेपालका ११ रिसोर्ट? – Tourism News Portal of Nepal
यी हुन् होटल भन्दा महंगा नेपालका ११ रिसोर्ट?
काठमाडौं । होटल भन्ने वित्तिकै सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल झट्ट सोच्ने गरेका छौ । तर विगत देखिको इतिहास हेर्ने हो भने पाँच तारे होटलभन्दा बढी लगानी गरेर खोलिएका सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरु महंगा र सुविधायुक्त छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय तारे होटल भन्दा पनि पर्यटक स्तरका रिसोर्टहरु खुल्नेक्रम झनै बढ्दै गएको छ । नेपालमा पाँच तारे होटलका भन्दा पनि बढी सेवा सुविधा दिएर खुलेका रिसोर्टहरु पुराना र नयाँ दर्जनौको संख्यामा रहेका छन् ।नेपाल भर पर्यटक स्तरका रिसोर्टहरुको संख्या २ सय भन्दा बढी छन् । हामीले चर्चा गर्न लगेका सुविधासम्पन्न रिसोर्टहरु जुन पाँच तारे होटलका भन्दा बढी सुविधामा खुलेका छन् ।
नेपालमा विगत देखिनै यस्तो चल्दै आएको छ । पुराना सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरु अहिले पनि चलिरहेका छन् । काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशभर यस्ता रिसोर्टहरु छ । उक्त रिसोर्टहरुले तारेको मान्यता नलिइकनै संचालनमा रहने गरेका छन् ।देशभर सुविधासम्पन्न रिसोर्टहरु १ सय भन्दा बढी रहेका छन् । पछिल्लो समय तयार भएका रिसोर्टहरु बढी मात्र चितवनको सौराह तथा पोखरामा बढी मात्रमा रहेका छन् । रिसोर्टहरुले पर्यटकहरुलाई लिने रुम चार्ज पाँच तारे होटलहरुको भन्दा पनि महंगो रहेका छन् ।
काठमाडौंको गोकर्णको उच्च भागमा रहेको गोर्कर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा महंगो पैसा तिर्न सक्ने पर्यटकहरु बसाई हुने गरेको छ । शहरकोबीच भागमा रहेको रिसोर्ट भए पनि जंगल समेत ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको छ । जसका कारण पनि पर्यटकहरुको मन लोभिने गरेको छ । नेपालमा पहिलो र सुविधासम्पन्न गल्फ रिसोर्ट कोर्ष समेत रिसोर्टमा रहेको छ ।६, वटा स्विट रुमा, ७८ वटा स्विट डिलक्स र १६ वटा डिलक्स रुम रिसोर्टमा रहेका छन् । त्यहाँ जाने पर्यटकले १ सय ६० डलर देखि ७ सय डलर सम्म एउटा रुमको तिर्ने गरेका छन् । जुन रकम अन्य पाँच तारे होटलहरुको भन्दा बढी हो । पाँच तारेहरुमा बढीमा २ सय डलरमा पर्यटकहरुले रुम पाउने परेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा उक्त रिसोर्टमा बसेर खिचेको फोटो टुईट गरेपछि द्ववारिकाज् रिसोर्ट धुलिखेलको चर्चा झनै चुलिएको थियो ।द्ववारिकाज् रिसोर्ट धुलिखेलमा रोयल स्विट, हेरिटेज एक्जिभेटिभ स्विट, हेरिटेज जुनियर स्विट, हेरिटेज डिलक्स रुम रहेका छन् । रमणीय स्थानमा रहेको उक्त रिसोर्ट सधै भरिभराउ हुने गरेको छ । ट्रिप एड्भाइजरीले समेत टप १० होटल तथा रिसोर्ट भित्र राखेका थियो । उक्त रिसोर्टमा जाने पर्यटकले प्रतिरात २ सय डलर दखि ५ सय डलरसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।
बेल्जियममा २० वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेका पुष्प अधिकारीको कास्कीमा ‘रूपाकोट रिसोर्टु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ३० करोड लगानी रहेको रिसोर्टमा ४२ वटा वातानुकुलित कोठा छन्।सन् २०१२ मा निर्माण थालिएको यो रिसोर्टको २ सय रोपनी कम्पाउन्ड छ । रिसोर्टका आठ वटा भवन छन् । अहिले मुख्य भवन, पार्किङ, स्वीमिङ पुल, गार्डेन र दुईवटा हेलिप्याड छन् । पैसावाल र प्राकृतिक सुन्दरताका पारखीहरुलाई लक्षित गरेर रिसोर्ट निर्माण गरिएको सञ्चालक अधिकारीले जानकारी दिए ।रिसोर्टको मूख्य विषेशता एकै ठाउँबाट बेगनास र रुपा तालका साथै दर्जनौं हिमशृंखला र पोखरा शहरको दृश्यावलोकन हो । रुपाकोटसँग बेलायतका राजकुमारले पैदल हिँडेको इतिहास पनि छ ।